Ukuba unqwenela ukuqhubeka nobomi bakho kunye nomlingane "ekuguleni nasekunyameni, ngokuvuya kunye nentlungu", ke kufuneka ucinge ngoluphi uhlobo lomcimbi lo mtshato uza kuba. Konke oku kubonakala ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa wonke umntu uyavuma ukuba lo lukhetho olubaluleke kakhulu nolunyanisekileyo lwabantu ababini abanothando.
Wonke umntu ufuna ukuba lo mhla ukhunjulwe ngobomi, kwaye iimkumbulo ezimnandi ngaye zavuya kuminyaka emininzi. Umtshato kwisiqithi kwi-swimsuit ngumcimbi ongenakulibaleka kubabatshatanga.
Abantu abatsha abasandul 'ukutsha namhlanje banokukhetha ngokukhethekileyo kwiiqithi eziqhelekileyo kunye namazwe apho naluphi na ixesha elungele ukuvuma ukuvuma kwabo, abagqiba ukuqinisa ubudlelwane babo nomtshato.
Umtshato kwiziqithi zaseLwandle lweCaribbean yindawo eyaziwayo kakhulu kwimicimbi yomtshato - Cuba, Dominican Republic, Jamaica, emva kwazo iziqithi zaseLwandle lwaseNdiya - iMauritius, iSri Lanka kunye neSychelles, apho ixesha lezulu elingafanelekanga, likhethwa, kodwa iise Seychelles zihle nakweyiphi mozulu. Ngesinye sezona ndawo zothando kunye neendawo ezintle zeplanethi yethu, sisiqithi saseSt. Luschia. Abemi abahlobo, umthamo wokutshisa umkhumbi kunye nomqondiso weentaba ezimbini. Ukufudumala okutshatyalaliswa kwamanzi ku-Caribbean, okubangela amandla ayo. Ukuphakama kwexesha kwiziqithi kubusika. Umtshato kwiziqithi zaseCuba - inkululeko yokuthandana, ubomi obusuku bobusuku kunye neelwandle ezingapheliyo. IJamaica isoloko igcwele ubomi. I-glare yelanga idlala kwi-mirror-like water surface yolwandle kunye nemifudlana, igubungela ukumamatheka kwabantu bendawo. I-Reggae kunye nemibala eqaqambileyo ye-Rostomanov iyancipha kwaye ikhulule. IRiphablikhi yaseRominican - amabhantshi angenammandla anesihlabathi esimhlophe, ama-coral reefs, amanzi acacileyo kunye nemvelo engaphandle. Emva kokutyelela apho, uya kuba nako ukuthetha ukuba ubekho kwindawo ephezulu yee-Antilles, wazama i-rum engcono kwaye wabona iimfene. Ngomntu okhetha ukungaqhelekanga, uya kunandipha umtshato kwiziqithi zaseSri Lanka. Izigqoke zelizwe ezikhethekileyo, izidlo eziqhelekileyo zomtshakazi, izandi zomdubho, iingoma zomdabu kunye neengoma kunye nemikhosi yendawo apho umkhosi uqhutyelwe khona uya kuhlala ekhunjulwa. Ekupheleni kwalo mbhiyozo, abasandul 'ukutshata baza kukhwela kwindlovu kwintlambo egciniweyo enesihlabathi segolide.
Umtshato kwisiqithi eLwandle lwaseNdiya ngoku unandipha ukuthandwa. Kule minyaka, isiqithi saseMauritius sihlala sisidume kakhulu ngomkhosi osisigxina somtshato kwi-swimsuits. Izibini zothando zinobudlelwane obukhethekileyo, okwenza le siqithi ibe yindawo ekhethiweyo yeholide ezibini ezithandanayo. Ukususela ekuqaleni kokufika kwabathandi, bazama ukuzalisekisa nayiphi na iminqweno yabo, okwenza ukuba bahlale kwisiqithi njengesiqhelo esihle sefilo, esingayi kulibala kuze kube sekupheleni kwekhulu. Kulo siqithi apho bekuhlala kunokuba kunikezelo oluhle kunye nolunqabileyo lwezibini ezithandanayo. Inani elikhulu leehotele kwisiqithi linikezela ngeemfuno ezizodwa, umzekelo, unikezela isaphulelo se-50% ngokuhlala komtshakazi, iintlobo ezihlukahlukeneyo ezivela ehotele, kwaye igumbi liya kuhlala likuhlangana neziqhamo, iintyatyambo kunye ne-champagne.
Umtshato kwi-Maldives kwi-swimsuit yithuba kulabo abakhetha ukhetho lomsebenzi olusemthethweni. Ezi ziqithi, ngokungathandabuzeki, zaphumelela ngamabhankqalazi abo angazilibalekiyo kunye namaza ebhakabhaka kunye nesihlabathi esimhlophe, kunye namathamba amancinci, ngobomi obungaphantsi kwamanzi. Le ndawo iyilungele ukuthungwa kwe-scuba kunye nokukhethwa koxolo. Ukuba ukubhiyozela kwakho kwenzeka eMaldives, uya kuzicoca ngokupheleleyo ngobumnandi be-caress kwaye uthabathe ukungathandabuzeki komnye nomnye. I-Maldives iphelele kwi-honeymoon apha, enokuthi ihlanjululwe ngokufanekisa ngesithethe, emva koko uza kufumana isatifikethi esikhethekileyo. Abo baye bavakashela i-Maldives, baphinda babuyele esi siqithi separadesi ngokuphindaphindiweyo.
Iiparele zalahleka e-Indian Ocean - eli lizwe linikezwa i-Seychelles. Amahlathi anamandla ezintabeni, amadonga aqhotyoshelweyo, asinxwemeni olubanzi kakhulu, abo banqwenela ukuthatha umhlalaphantsi kwisandi esingenasiphelo kunye nesigxina esingunaphakade. Bonke abo baye batyelela i-Seychelles bayathandana nendalo enyantombazana, iilwandle ezinxweme nge-snow-white white kunye ne-crystal clear sea. Ukuba ufuna ukuhlala phantsi ukuze kungabikho mntu ekuphazamisayo ngexesha lomthendeleko, ngoko kufuneka uthanda umtshato kwiziqithi zaseSy Seychelles kwi-swimsuits. Oku kuluhlu lwezinto ezilungileyo kunye neentlobo zezilwanyana ezingabonakaliyo. Nantsi yonke into isekelwe othandweni kwaye ivelisa kuphela abantwana apha. Bona ubuninzi beentyatyambo, iintaka kunye neenkumbi zendlovu ezithakazelisayo. Isithethe somlingo sokutshata kwiSychechelles sigcwele izihlandlo zothando. Emva komtshato, kunokwenzeka ukufihla kwihlabathi lonke kwelinye lamabhendi amaninzi apho uya kunikelwa kuphela omnye komnye ngexesha lokutshata.
Iziqithi zaseFiji ziindawo ezingenakunqwenelekayo zokuchitha iholide efanelekileyo, egcwele ubuhle kunye nemfihlelo. Ixesha apha alikho phantsi kwayo nayiphi na imithetho, ihamba ngendlela ekhethekileyo. Iziqithi ezisezantsi kwePacifi zixhomekeke kwintando ye-XIX leminyaka-amaqhinga amabi, abaqhubi abasaziwayo, amanqabana amanqanawa kunye nothando lokwenene. Ezi ziqithi zizona ndawo zilungele ukunyuka kwenyango okanye ziza kuba yindawo engakhohlwayo yosuku olubalulekileyo ebomini bakho.
Ihotele yaseVatulele kwiziqithi zaseFiji idume ngokuqhuba imitshato yomtshato. Zonke iindwendwe zendawo yokutyelela ziindwendwe zalo mthendeleko omangalisayo, apho amaqhawe aqhelekileyo aseFiji agcina umtshakazi egqoke i-swimsuit, aze ahambe naye ekuhambeni olujikeleze isiqithi.
Ngayinye yalezi ziqithi ayikho inkulu ngokwaneleyo, kodwa nganye iqulethe inkcazo yabantu abanothando. Naluphi na iparadesi emhlabeni ongewunyuli umkhosi osisigxina, umtshato wakho kwisiqithi kwi-swimsuit uya kushiya kuphela imemori eqaqambileyo kunye nenhle kakhulu yesenzo esibalulekileyo kunazo zonke ozenzayo ebomini bakho.
Isobho le-Tomato-ikhukhamba kunye ne-garlic croutons
UAna Grachevskaya watshata kwiingubo ezimbini, iifoto kunye namavidiyo avela kumtshato
Iingcambu eziququzelela ukuhanjiswa
Isaladi kunye ne-beet kunye noshizi
Iimeko ze-laser cosmetology
Izifo zemilenze kunye nezipikili, unyango
Imigaqo yokuzisa ukutya okuncedisayo kubantwana
Ukukhangela iKrisimesi kwitiyi: iindlela kunye nokutolika
Ukusinda komntwana ekhaya, njani ukukhusela?